Mashruuca Daryeeelka Cafimaadka Xoolaha Soomaaliyeed
Tuesday April 27, 2010 - 15:01:12 in News & Events by Super Admin
Waxaa laga wada dheregsanyahay ahmiyadda ay xoolaha nooli u leeyihiin dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Geeska Afrika.
Tan iyo intii ay bur-burtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa ilihii dhaqaale oo dhan oo ay xooluhu ka mid yihiin ku dhacay bur-bur laxaad leh.
Kaalintii daryeelka caafimaadka xoolaha ee dawladdii dhexe ka baxaday waxaa soo galay hayado madax banana oo caalami ah, kuwaas oo in kastoo waxqabadkood iska yaraa hadana aan ka darin.
Tan iyobadhtamihii sanadihii1960maadka waxaa deeg bixiyayaal badani oo uu ugu horeeyo Midowga Urub (EU) maal geliyeen mashaariic dhowr ah oo laga fuliyey guud ahaan qaaradda Afrika inteeda badan oo ay ku jiraan Dhul-deegaaneedka Soomaalida (Somali Eco-system) kuwaas oo ay ka mid ahaayeen mashruuc la odhanjirey JP-15 (Joint Project 15) PARC (Pan-African Rinderpest Control Programme), PACE (Pan-African Control of Epizootic Diseases). Mashriicdaasi waxay ku wajahnaayeen dabargoynta cudurkii loo yiqiin Dabakaruubka ama Shifowga. Maanta waxaa la joogaa heer la filayo in cudurkaas Dabakaruubka adduun weynaha laga tirtiray.
Sanaadkii 2005 ta markii uu dhamaaday mashruucii PACE oo ka hirgalay 32 wadan oo Afrika ah, Midowga Urub wuxuu Soomaaliya u sameeyey mashruuc kale oo la yiraahdo Somali Animal Health Services Project oo marka la soo gaabsho loo yaqaan SAHSP. Wejigii hore ee Mashruucaas oo ahaa mid socdey 3 sanadood waxaa fuliyey saddex hayadood oo Talyaani ah kuwaas oo kala aha aha Terra-Nuova, COOPI iyo UNA wuxuuna dhamaay aakhirkii sanadkii 2007da.
Bilawgii sannadkan 2008 ayuu Midowga Urub hadana maal geliyey wejigii labaad ee Mashruucaas oo la yiraahdo SAHSP II kaas oo socondoona laba sanadood. Mashruucan oo ay hay’adahii fuliyey wejigii kowaad ku soo biireen laba kale oo kala ah VSF Germany iyo FAO wuxuu xooga saarayaa sidii loo adkayn lahaa la dagaalanka cudurada xoolaha siiba kuwa dhoofka ama suuqgeynta aafeeya.
(War dheeraad ah waxaad ka heli kartaa websitka mashruuca ee ah: www.sahsp.org)
Wacyigelinta dadweynaha xoolaha la xidhiidha ama daneeya waa qodob ka mid ah hawlaha Mashruuca SAHSP II. Maqaaladan ama qoraaladan ku saabsan cudurada halista ah ee xooluhuna waxay ka mid yihiin wacyi gelintaas. In kastoo la garan karo in reer miyiga xoolaha dhaqdaa aanay awood ama aqoon u lahayn qalabka casriga ah ee Internetka, haddan waxaa la hubaa in neefka xoolaha ah ee la dhoofiyaa uu sii maro gacanta dad aan ka yarayn 10 qof laga bilaabo kuu u dhashay ilaa kan markabka la sii raacaya. Qoraaladan waxaa loogu talagalay inay dadkaas reer magaalka ahi akhristaan una gudbiyaan inta kale.
Wuxuu Mashruuca SAHSP II u mahad celinayaan intaa ka qayb qaadata fidinta macluumdkan muhiimka ah.
SAHSPII Project Management Unit (PMU)